Abraham Madụ, USA
Previous Article Gịnị kwa nụ na-ebu mmadụ isi n’elu ụwa nke a ọtụtụ ihe gbagwojuru ya anya?
Next Article ADỊGHỊ N’OTU NDỊ IGBO: ATỤMATỤ IJI KWADO MGBAKỌ NDỊ IGBO NKE EMERE N’OBI IGBOZURUME, EMENE DỊ N’ENUGWU MARCH 12-14, 2014
Igwe bụ ike. A nyụkọ amịrị ọnụ ọ gbọ ụfụfụ. Njikọ ka. Igbo kwenu! YAA! Ụmụ Igbo Ụmụ Chukwu, Ọ bụ onye ga-ekewa anyị na Chi anyị? Ọ dịghị onye pụrụ Igbochi ọlụ ọma Chukwu ụmụ Igbo ka ọ ghara ịga n’iru/ihu. Ọ bụ onye ga-eburu mmụọ ntigharị anya bata n’etiti ụmụ Igbo, ụmụ Chukwu, ka ha ghara ịma onwe ha dị ka ndị ọma ha na Chineke ha yị mgbe nile?
Ọ bụghị ndị Ọcha gwara anyị okwu ndịa: Njikọ ka. A nyụkọ amịrị ọnụ ọ gbọ ụfụfụ. Ukwu azịza anaghị agbaji agbaji. Igwe bụ ike.
Ụmụ Igbo, ọfọ mụ bụ ka ụmụ Igbo mata onwe ha dịka ụmụ Chukwu ha bụ na gbo gbo. Isee! A tụara ọmara ọ mara. A tụara ofeke, o feba n’ọhịa. Igbo mara nụ onwe ụnụ. ị kulie otele gị e soro gị. A naghị agbalarị Chi gị n’ọsọ. Onye gbakarịrị Chi ya n’ọsọ, ga agbagbu onwe ya. Chineke adịghị agbanwe agbanwe. Ka ọ dị na mbụ n’ime gị, ka ọ dịkwa ugbu a n’ime gị, o tua ka ọ ga-adịgidekwe n’ime mụ na gị rukwa mgbe anyị ga anwụ!
Onye kwe Chi ya ekwe! Ụmụ Igbo aghọtala, were kwa kwe na ha na Chi ha bụ otu. Nna na nne anaghị enye ụmụ ha mmiri nshị ka ha ṅụa. Maka na ha mara na ha na nwa ha bụ otu. Ụmụ Igbo na Chineke ụmụ Igbo nọ n’ime anyị mgbe nile. Chineke, ụmụ Gị, ụmụ Igbo nọkwa Gị n’aka ooooo. Chineke nara ekele!
A tụghị ime anyị n’ime mmehie. Nke a bụ okwu asị e ji ebunye ụmụ gị ibu arụ. Chukwu dị mma, ụmụ Chukwu nile dịkwa mma. Ọ dịghị unyi ọbụla dị ha n’ime, dịka ọ dịghị unyi dị n’ime Chukwu ụmụ Igbo, cha cha.